Home Wararka Guddigiii Baaristii Afgambiga 27 December oo bilaabay Baaritaan adag.
[XOG] Guddigiii Baaristii Afgambiga 27 December oo bilaabay Baaritaan adag.
Guddigii uu dhawaan Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble u magacaabay inay baaris dhab ah ku sameeyan ciddii ku lugta laheyd af-gambigii fashilmay ee 27-kii December 2021 ayaa maanta la kulmay Taliyaha ilaalada Madaxtooyada.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa MOL u sheegay in Guddiga ayaa wareystay Taliyaha ilaalada Madaxtooyada, Korneyl Xasan Dhicis su’aalo ka weydiiyen baaritaankooda la xiriira afgambigii lagu qaaday hay’addaha dastuuriga ee dalka.
Kulanka wareysiga ah ee la xiriiray baaristii loo xil saaray guddiga ayaa waxa uu goordhoweyd ka dhacay xarunta wasaaradda warfaafinta, sida ilo xog ogaal ah aay u sheegeen MOL.
Previous articleQoor Qoor & Laftagareen oo diidan Qodobo ay soo jeediyeen Midowga musharixiinta
Next articleXiritaanka shirka GWQ oo dib loo dhigay “Qodoba aan weli xal laga gaarin”
Mursal oo ku soo baxay Doorashadii boobka ee Villa Somalia
Xog Qarsoon. Isbadal lagu sameen rabo laamaha Amniga Galmudug si loosoo...